AFT: homarihina manokana ny faha-100 taon’ny « Armistice » | NewsMada
AFT: homarihina manokana ny faha-100 taon’ny « Armistice »
Feno 100 taona, amin’ity taona ity, ny “Armistice”, na ny fanaovan-tsonia ny famaranana ny ady teo amin’ireo firenen-dehibe mpifanandrina (Alemaina, Frantsa, Angletera, Rosia, Japon, Etazonia), tamin’ny Ady lehibe voalohany. Nandray anjara tamin’izany ny vatan-dehilahy avy amin’ny firenena nozanahin’ireo firenena matanjaka ireo.
Tsy handalo fotsiny ity daty manan-tantara ity fa homarihina manokana, ao amin’ny Alliance française (AFT) Andavamamba, ny 5 hatramin’ny 9 novambra izao. Maromaro ny hetsika hotanterahina mandritra ireo fotoana ireo.
Voalohany amin’izany ny fandefasana horonantsary fanadihadiana, maharitra 52 minitra. Arahina adihevitra sy fanehoan-kevitra izy ity, miaraka amin’ny manampahaizana manokana momba ny tantara ary ny mpianatra amin’ny ambaratonga ambony. Ny alatsinainy 5 novambra tolakandro no hanatanterahana izany.
Haharitra dimy andro kosa ny fampirantiana saripika, nataon’i Guillaume Doizy. Hitondra fanazavana mikasika ireo sanganasana aranty ny mpianatra amin’ny sampam-pianarana tantara, isan’andro.
Tsiahivina fa efa zanatany frantsay i Madagasikara, nandritra ny Ady lehibe voalohany. Izany hoe, anisan’ireo nandray anjara tamin’ity ady ity ny vatan-dehilahy malagasy, tamin’izany fotoana izany. Misy ny taratasy nosoratan’izy ireo, mbola voatahiry any amin’ny arsivam-pirenena. Ao anatin’ireny taratasy ireny no nampitany ny zava-nisy sy niainany nandritra ny ady. Vavolombelon’ny tantara ireny Malagasy ireny ary sarobidy ny zava-bitany. Hisy ny famakiana ireo taratasy ireo, ny alakamisy 8 novambra tolakandro.